Ukusisela – iAfrika
IsiZulu sakithi sithi izandla ziyagezana kanti futhi akudlulwa ngendlu yakhiwa. Lokhu kusho ukuthi ukuhlupheka komuntu kwaZulu yinto efihlwayo, akuthi ngoba nakhu umuntu uyantula bese kugiywa ngethambo lakhe. Endaweni bekuthi uma kukhona umnumnzane onamandla ofuyile, bese esisela lowo ongenawo amandla noma ontulayo. Lokhu bekwenziwa ngezindlela ezimbili.
Indlela yokuqala yokusisela
Eyokuqala yilena yokucela umfana wokulomuzi abaswele kuwo ukuthi abaqaphele imfuyo, kuvunyelwane ukuthi lo ozolusa izinkomo uzohola kanjani futhi ngemuva kwesikhathi esingakanani. Uma kuwukuthi bavumelana ngezimbuzi bekuthi njalo ngemuva kwezinyanga eziyisithupha kuthunyelwe imbuzi kubo kwalowomfana oqaphe izinkomo, okusho ukuthi ngonyaka bekuba yizimbuzi ezimbili, noma uma kuvunyelwene ngezinkomo bekuba yinkomo eyodwa ngemuva kweminyaka emibili.
Indlela yesibili yokusisela
Enye indlela ibifana nokubolekisa ngemfuyo. Umnumnzane osuke ecebile ubeyaye anike lowo ongacebile izinkomo zobisi noma ezimbili engalindele nkokhelo ngalokho. Phela akekho ongazi ukuthi amaZulu nendwamba kufana ncamashi nezithupha ziya egwayini ngoba phela kuphilwa ngawo kanye nenyama nezitshalo. Bekuyaye kuthi ke ngemuva kweminyaka ethile lona owayesiselwe ayibuyisele imfuyo uma nay esefuyile ngokuphenjelwa wumakhelwane wakhe.
Tags Ukusisela, Ukusiza